» “डिग्रीको ,थेसिस प्रतिकिलो १२ रुपैयाँ,मा बिक्री” ! “डिग्रीको ,थेसिस प्रतिकिलो १२ रुपैयाँ,मा बिक्री” ! – हाम्रो खबर
“डिग्रीको ,थेसिस प्रतिकिलो १२ रुपैयाँ,मा बिक्री” !
हाम्रो खबर संबाद दाता 93 Views
“काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्नातकोत्तर तहको सोधपत्र (थेसिस) लेख्ने विद्यार्थीले तीन प्रति थेसिस विश्वविद्यालयमा बुझाउनुपर्छ । एक प्रति क्याम्पसमा, एक प्रति केन्द्रीय पुस्तकालयमा र एक प्रति परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा बुझाउनुपर्छ ।”
“यसरी विद्यार्थी,ले बुझाएको थेसिस परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले भने पुराना कागजको रुपमा उद्योगलाई बिक्री गर्ने गरेको पाइएको छ, । कार्यालयले राख्ने ठाउँको अभाव भएको कारण देखाएर विद्यार्थीले बुझाएको थेसिस र उत्तरपुस्तिका कागज उद्योगलाई बेच्ने गरेको हो”
“परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशी थेसिस बेच्ने प्रचलन २०५६ सालदेखि नै रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार केन्द्रीय पुस्तकालयमा बुझाएको थेसिस सुरक्षित हुने भएकाले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा बुझाएको थेसिसचाहिँ नतिजा प्रकाशन भएको चार महिनापछि बेच्ने गरिएको छ ।”
‘भविष्यमा रेफरेन्सका लागि केन्द्रीय पुस्तकालयको प्रयोग हुन्छ । हाम्रो चाहिँ रिजल्ट भएपछि छ महिना भन्दा बढी राख्ने स्थान हुँदैन । भाषा विज्ञान प्रतिष्ठान र योजना आयोगले आवश्यक परेको लैजान्छ । बाँकी रहेको हामीले, गोपनीयताका साथ डिसमेन्टल गर्छौ’ परीक्षा नियन्त्रक जोशीले भने ।”
“परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले उत्तरपुस्तिका र थेसिस पहिले पुराना कागज संकलकहरु,लाई नै बिक्री गर्ने गरेको थियो । त्यसो गर्दा बदाम र चना चटपटे बेच्नेको हातमा पनि पुगेको भेटिएपछि कागज उद्योगलाई बिक्री गरेको परीक्षा, नियन्त्रक जोशी, बताउँछन् ।
“विद्यार्थीले बुझाएका शोधपत्र परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा प्रयोजनविहीन हुने उनले बताए । ‘हामी गोपनीयताका साथ टुक्रा बनाएर पेस्ट बनाउने सर्तमा मात्रै दिन्छौं । त्यसको फेरि कागज नै बन्ने हो’ जोशीले भने ।”
“परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले उत्तरपुस्तिका र थेसिस पहिले पुराना कागज संकलकहरुलाई नै बिक्री गर्ने गरेको थियो । त्यसो गर्दा बदाम र चना चटपटे बेच्नेको हातमा पनि पुगेको भेटिएपछि कागज उद्योगलाई बिक्री गरेको परीक्षा नियन्त्रक जोशी बताउँछन् ।”
“परीक्षा नियन्त्रक कार्यालयले आफूलाई बुझाएको थेसिस कहिल्यै सुरक्षित गरेर राखेको छैन । ०५६ सालअघि यस्ता थेसिस र उत्तरपुस्तिका खाल्डो खनेर पुर्ने गरेको परीक्षा नियन्त्रक जोशी बताउँछन् ।”
‘यसरी पुर्दा २०/३० हजार खर्च हुन्थ्यो अहिले केही नभए वर्षको दश लाख, रुपैयाँ (थेसिस र उत्तरपुस्तिका बेचेर) जत्ति आउँछ । वेस्टेज भएको चिज फेरि प्रयोग पनि हुने,भयो । त्रिविको आयस्रोत पनि बढ्यो’ उनले भने ।”
“पनिकाले ०५६ सालमा प्रतिकिलो ४ रुपैयाँमा बेच्ने गरेको थेसिस र उत्तरपुस्तिका हिजोआज प्रतिकिलो १२ रुपैयाँमा बिक्री गरिने परीक्षा नियन्त्रक जोशीले बताए । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा शोधपत्र मात्रै वर्षको २० देखि ३० हजार प्रति जम्मा हुने गर्छ । वर्षमा ३० देखि ४० लाख उत्तर पुस्तिका जम्मा हुने भएको र राख्ने स्थान नहुने भएकाले कागज उद्योगलाई बेच्ने गरेको उनको दाबी छ”
“पुस्तकालय प्रमुख,भन्छन् : गलत हो”
“त्रिविको केन्द्रीय पुस्तकालय प्रमुख पूर्णलाल श्रेष्ठ विद्यार्थीले मिहेनत गरेर बुझाएको शोधपत्र कागज उद्योगलाई बेच्नु गलत भएको बताउँछन् । ‘मैले पनि समाचार पढेर थाहा पाएँ, तर त्यो राम्रो भएन । शैक्षिक हिसाबले सोच्दा ठीक होइन’ उनी भन्छन् ।”
“राख्ने ठाउँ नभए शोधपत्र बुझ्ने नयाँ उपाय खोज्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘राख्ने ठाउँ साँघुरो होला, तर नयाँ उपाय ल्याउनुपर्‍यो । हार्डकपीको सट्टा सफ्टकपी बुझनुपर्‍यो । त्यसलाई डिजिटलाइज्ड गर्न पनि सहज” हुन्छ’ श्रेष्ठ भन्छन् ।
“केन्द्रीय पुस्तकालयले पनि ६ वर्षयता स्नातकोत्तर तहको थेसिसको सफ्ट कपी मात्र बुझ्ने गरेको छ । केन्द्रीय पुस्तकालयले पुराना शोधपत्र, अध्ययन रिपोर्टलाई पनि डिजिटलाइज्ड ,गरिरहेको छ । ५०–६० हजार थेसिसमध्ये २५ प्रतिशत मात्र डिजिटल गरिएको प्रमुख श्रेष्ठले बताए ।”
“डीन कार्यलयमा, केन्द्रीय विभागहरुमा र कलेजमा भएका सोधपत्र र अध्ययन प्रतिवेदन पनि डिजिटल बनाउनु उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ । ‘सकियो भने जहाँ जहाँ डकुमेन्ट छ,त्यहाँबाट अपलोड गर्ने नभए हामी कहाँ पठाइदिनुहोस हामी गर्छौं भनेर अभियान थालेका छौं’ पुस्तकालय प्रमुख श्रेष्ठले भने ।”
“विद्यार्थीलाई नै फि,र्ता दिनु वेश”
“विद्यार्थीले मिहेनत गरेर तयार गरेको शोधपत्र बेच्नु गलत भएको पूर्वशिक्षा सचिव महाश्रम शर्मा बताउँछन् । उनले बेच्नुभन्दा सम्बन्धित विद्यार्थीलाई नै फिर्ता दिनु उपयुक्त हुने सुझाव दिए ।”
“‘विद्यार्थीले धेरै मिहेनत गरेर तयार गरेका हुन्छन् । यदि पनिकामा राख्ने स्थानको अभाव भए आवश्यक जाँचपछि सम्बन्धित विद्यार्थीलाई नै फिर्ता दिनुपर्छ । बेच्नु ठीक होइन’ शर्माले भने ।”
“शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले डिजिटल कपी माग्नु उचित हुने सुझाव दिन्छन् । त्यो सम्भव नभए क्याम्पसले गरेको सिफारिसका आधारमा नतिजा प्रकाशन गर्ने वा नतिजा लिन आउँदा सम्बन्धित विद्यार्थीलाई नै थेसिस फिर्ता दिन सकिने उनको भनाइ छ ।”
‘विद्यार्थीसँग अनेक खर्च, मिहिनेत ,गराएर लिने अनि केही समयपछि आफूले बेच्नु भनेको बद्मासी हो । प्रिन्ट, बाइन्डिङलगायतको खर्च गराएर लिने अनि राख्ने ठाउँको अभाव भएको भन्दै बेच्नु विद्यार्थीप्रति अन्याय हो’ शिक्षाविद्, कोइरालाले भने ।”